Kabista siismada ah ee dib u noqosho ee Armenia waa kuwan:
Tusaale ahaan: qoys oo 2 qaan gaar ah iyo hal ilmo oo da’yar ah ka kooban waxaa la siinayaa €1800 + €1800 + €2800 = € 6400. Wadartaasi waxaa ay ugu badnaan lacag ahaan u helayaan €900.
Solid Road waxay bixisaa tababarro gaagaaban oo kala duwan si xirfad lagu shaqeeysto loo barto. Aqoonta oo aad hesho inta tababarka socdo waxa aad uga bilaabi kartaa shirkad waddankaada oo aad ka timid. Tababarrada oo aad ku xirfad baraneeyso waxaa dhinac socda tababar ganacsiyeed markaasd dhammeysana waxaa lagu siinayaa shahaado. Waxaa la socda lacag aad u adeegsan karto qalab oo kugu caawini kara dib ula qabsashada bulshada. Brojektiga project The Green Way ee Jidka Adag (Solid Road) waxa ay caawineysaa qooysaska Armenia ka yimid oo si tabarruc ah dib ugu noqonaayo Armenia.
Caritas Armenia. VluchtelingenWerk waxa ay Armenia wada shaqeyn la leeyihiin Samafalayaasha Armenia (Caritas Armenië). Samafalayaasha (Caritas) waxa ay hagaan reer Armenia oo dib u soo noqday (shaqsi iyo qooysba) si ay nolol cusub u bilaabaan. Iyaga ayaa dadka dib u soo noqday ku qaabilaaya degada diyaaradaha, ku caawinaaya baadi goobka hooy (ku meel gaar ah) waxa ayna ku garabgalayaan sidii ay u sameyn lahayeen shirkad yar ama ay shaqo u heli lahaayeen. Waxa ay kaloo kaa caawini karaan helista xirfad- ama wax-barashada, shax xiriiro oo wax gal ah, waxa ayna dadka u baahn u gudbin karaan hey’adaha caafimaadka. VluchtelingenWerk waxa ay la xiriireysaa ilaa sannad dib u noqoshada keddib hey’adda lammaanaha la ah si ay ula socdaan sida xaladdaada ay noqotay.
Haddii aad garabgalka IOM xulatay, waxaa ku caawinaaya shaqaalaha Xafiiska-IOM ee Yerevan sida aad u bixineyso lacagta-dabiicga ah. Taasi inta ay tahay waxaad u adeegsan kartaa tusaale ahaan kiro, barasho xirfad, tababar, iibka shirkad iwlm.